नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पत्रकारितासमेत कि माफियाहरुको मुठ्ठीमा, कि राजनीतिक पार्टीको मुठ्ठीमा परिसकेको छ !
पत्रकारितासमेत कि माफियाहरुको मुठ्ठीमा, कि राजनीतिक पार्टीको मुठ्ठीमा परिसकेको छ !
नेताहरुले मुलुकका लागि केही काम गरेनन् । त्यसैले यो मुलुक बन्न नसकेको हो भनेर हामीले धेरै लेखिसक्यौं, बोलिसक्यौं । तर, यसको उत्तर खोज्दै जाँदा हामीले चाहिँ आफ्नो तर्पmबाट मुलुकका लागि आजसम्म के गरेका छौं त ? अनि हामीचाहिँ कस्ता छौं त ? कसैलाई सोधिरहनै पर्दैन । त्यो त हामीले हाँक्ने मोटरसाइकलको हँकाइबाटै सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुअघि लाइनमा बसेर सभ्य बन्दै गाडी चढ्नुपर्छ भन्ने कुरासमेत हामीलाई थाहा छैन । वृद्धवृद्धाहरुलाई समेत घचेट्दै ठेलमठेल गरेर सिटमा बसिसकेपछि ठूलै युद्ध जितेजस्तै गरी गमक्क पर्ने हाम्रो बानी नै परिसकेको छ । आफ्नो अगाडि थरथर काँपेर उभिरहेकी ८०–९० वर्षकी वृद्धालाई समेत नदेखेजस्तो गर्ने तर हुलमा कुनै तरुनी उभिरहेको देखेपछि भने ती वृद्धालाई ‘आमा बस्नुस्’ भन्दै आफू बिस्तारै तरुनीछेउ उभिन पुग्ने गर्छौं । यो लेख लेख्नुअघि बसभित्रको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न काठमाडौंको रत्नपार्कबाट थानकोट जाँदा बसभित्र टेक्ने ठाउँ पनि थिएन । तर, सवारीचालकसँगैको एउटा सिट भने खालि रहेछ । सँगै उभिइरहेकी एकजना वृद्धालाई त्यहाँ ठाउँ दिन अनुरोध गर्दा चालकले खाऊँलाभैmँ गरी झन्डै गाडीबाट ओरालेको ! एकछिन्पछि सोल्टीमोडमा गाडी रोक्दा त्यहाँबाट चढेकी एउटी तरुनीलाई ठाउँ दिन पो त्यो सिट खालि राखिएको रहेछ । कुन बस स्टेसनमा कतिखेर राम्री केटी गाडीमा चढ्छन् भन्ने कुरा लोकल बसका चालकहरुलाई कण्ठै हुने रहेछ कि क्या हो ? अहिले चलिरहेको ‘मी टु’ अभियानले उनीहरुलाई कतिको सजग गराएको होला, त्यो भने थाहा हुन सकेन ।
के उसो भए, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाभित्र हुने बेथितिहरुलाई इमानदारितापूर्वक उजागर गर्ने जिम्मेवारी बोकेका हामी पत्रकारहरु मात्र हाम्रो समाजका असल नागरिक हौं त ? यो लेख लेखिरहँदा एउटा पुरानो सम्झना याद आयो । ‘पत्रकार आफ्नो पेसामा इमानदार र असल भइदिएका भए आज मुलुकका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकाजस्ता तीनवटै अंग यसरी पंगु हुन्थे त?’ भनेर नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास पुस्तकका लेखक स्वर्गीय ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले यस स्तम्भकारसँग आपूm बित्नु केही समयअघि प्रश्न गरेका थिए । उनी बितेको धेरै वर्ष व्यतीत भइसक्यो । तर, आजका दिनसम्म आपैंm पत्रकार भएर पनि यसको सही उत्तर खोजेर केही लेख्न सकिएको छैन ।
आफ्नै श्रीमान्लाई पनि गुमराहमा राख्न हिचकिचाउँदैनौं । वृद्ध बाबा–आमालाई सन्तानले वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने कुरा त फेसनजस्तो भइसकेको छ भने आफ्नो सन्ततिको भविष्यको बारेमा समेत हामीलाई चिन्ता हुन छाडिसक्यो । यति भएपछि समाजले के भन्छ, कसलाई के मतलब ? देख्छु, मान्छे भौतिक सुखका लागि बिहानदेखि पैसाको पछि लागेको लाग्यै छन् । असल र राम्रा कुरामा हैन, सम्पत्तिमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ, चाहे त्यो धन–सम्पत्तिको आर्जन गलत धन्दाबाट नै किन नहोस् । धन–सम्पत्ति मात्र पाउन पाए हामीलाई आफ्नै इज्जत–प्रतिष्ठाको समेत कुनै मतलब नहुने भइसक्यो ।
यी त भए जनताका कुरा ! त्यागी बनेर मुलुक र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने अधिकांश नेताहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । आँखामा पट्टी बाँघेर न्याय–निसाफ दिनुपर्ने न्यायमूर्ति बिचौलियाको इशारामा न्याय–निसाफ दिन तम्सिन्छन् । सेनामा समेत भ्रष्टाचारका कुराहरु आइरहेका छन् । राष्ट्रको सेवक बनेर सेवाग्राहीको सेवा गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुलाई २१ औं शताब्दीमा पनि सरकारले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भनी किरिया ख्वाइरहनुपर्ने हो र ?